» Bayern Munich Oo Emirates Ugu Awood Sheegatay Kooxda Arsenal +SAWIRO
Bayern Munich Oo Emirates Ugu Awood Sheegatay Kooxda Arsenal +SAWIRO
Feb 20, 2013 - jawaab	Aqrisatay:3681Kooxda Bayern Munich ayaa hal lug la sii gashay wareega 8da ee Champions League ka dib markii ay 3-1 ugu awood sheegatay kooxda Arsenal oo marti loogu ahaa Emirates Stadium lugta hore ee wareega 16ka.
Arsenal ayaa ciyaarta ku bilaabatay si fiican, iyadoo kubada heysatay laakiin 7 daqiiqo markii ay socotay waxaa hogaanka ciyaarta u qabatay kooxdii martida aheyd Bayern Munich.
Mueller ayaa kubad karoos gaaban ah u soo dhigay Toni Kroos oo taagnaa afka hore ee diilinta ganaaxa, islamarkaana kubada sideeda kula qabtay taasoo dabmartay goolhaye Szczesny. Waana goolkii 5aad ee Toni Kroos uu ka dhaliyo Champions League.
Bayern Munich ayaana goolka ka dib u muuqatay mid halis ah, iyagoo cadaadis saarayay Arsenal, waxaana ay goolkoodii labaad heleen 20 daqiiqo markii ay socotay ciyaarta,
Kooner la soo tuuray ayaa waxaa madax ku soo taabtay Van Buyten ka hor inta uusan Szczesny badbaadin laakiin waxaa durbadiiba shabaqa geliyay Thomas Muller, iyadoo Arsenal ay ka muuqatay daafac liita. Waa goolkii afaraad ee Thomas Muller uu ka dhaliyay Champions League xilli ciyaareedkan.
Bastian Schweinsteiger ayaana jaale ka qaatay Bayern Munich daqiiqadii 36aad ee ciyaarta taasoo la micno ah inuu seegi doono kulanka lugta labaad ee ka dhacaya Munich bisha soo socota.
Dhamaadkii qeybta hore ayayna FC Hollywood heshay fursad kale oo qaali ah markii Lahm uu soo dhigay karoos fiican iyadoo uu madax ku helay Mandzukic oo cidna aysan xiraneyn laakiin dadaalkiisii waxa ay hareermartay goolka.
Waxaana qeybtii hore lagu kala nastay hogaan 2-0 oo ay u qalantay kooxda Bayern Munich. Qeybtii labaad ayaana Arsenal ay ciyaarta ku soo laabatay markii ay gool soo ceshteen daqiiqadii 55aad ee ciyaarta. Arsenal ayaana loo dhigay kooner muran uu ku jiro, waxaa u soo tuuray Vermaelen waxa ay soo dhaaftay daafacyada Bayern ka hor inta uusan madax ku dhalinin Lukas Podolski oo shabaqa ka soo taabtay kooxdiisii hore ciyaartana ka dhigay 2-1.
Waana goolkii afaraad ee Lukas Podolski ee Champions League uu ka dhaliyay xilli ciyaareedkan, iyadoo afarta gool uu ku dhaliyay afar fursadood oo uu goolka u helay.
Arsenal ayaana qeybtii labaad aad uga fiicneyd sidii qeybtii hore iyagoo cadaadis u abuurayay kooxda Bayern Munich, waxaana ay ku dhawaadeen inay helaan goolka barbaraha daqiiqadii 72aad ee ciyaarta markii Theo Walcott uu karoos gaaban u soo dhigay Olivier Giroud oo markii bedel ku soo galay kaasoo kubada sideeda kula qabtay laakiin waxaa babac dhigay oo ka badbaadiyay Manuel Neuer, waxaana ay aheyd fursad dahabi ah.
Laakiin dadaalkii iyo rajadii Arsenal ayaa noqotay mid hal mar uu soo wajahay caqabad weyn markii Bayern Munich ay hogaanka sii dheereysatay oo ay heshay goolkii 3aad daqiiqo 77aad ee ciyaarta, Mario Mandzukic ayaana kubad kore shabaqa ku riday, taasoo ciyaarta ka dhigtay 3-1.
Manuel Neuer ayaana markaasi ka dib fursad qatar ah ka beeniyay Jack Wilshere, ka hor inta uusan Mario Gomez uu isna fursad dahabi ah ka qasaarin kooxdiisa markii kubad uu soo tufay goolhayaha Arsenal uu dusha sarre ee goolka mariyay.
Waxaana ay ciyaarta ku dhamaatay 3-1 oo ay ku awood sheegatay kooxda Bayern Munich oo guul iyo seddex goolba ku soo gaartay iyadoo marti ah, taasoo ka dhigeysa inay hal lug sii gashatay wareega 8da ee Champions League, inkastoo ay lugta labaad ku soo dhaweyn doonto garoonkeeda kooxda Gunners.
Arsenal ayaana rajadeeda koobka kaliya ee u soo haray xilli ciyaareedkan uu u muuqdaa mid ceel dheer ka sii laadlaada. Hadii ay natiijo fiican ku gaari waayaan Munich waxa ay ka dhigmeysaa inay xaqiijisan doonaan xilli ciyaareedkii 8aad oo isku xiga oo Arsenal aysan wax koob ah qaadin.
Kulanka kale ee wareega 16ka ee caawa kooxda FC Porto ayaa 1-0 ku qaarjisay kooxda Malaga, iyadoo Joa Moutinho uu u dhaliyay kooxda reer Portugal goolka guusha.